DEG-DEG: Alshabaab oo weerar qaraxyo iyo fool ka fool ah ku qaaday guriga Shariif Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Xarakada Alshabaab ayaa maanta weerar is-qarxin iyo mid toos ah ku qaadday xarrunta madaxtooyada magaalada Baydhabo, halkaasoo uu ku sugnaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadam iyo xubno ka mid ah maamulkiiisa.
Weerarka ayaa ku bilowday gaari isku qarxiyey albaabka madaxtooyada Baydhabo, waxaana markaas kadib rag hubeysan rasaas ku bilaabeen xarrunta.
Ragga weerarka qaaday ayaa la sheegay in ay damacsanaayeen iney gudaha u galaan Madaxtooyada, hase ahaatee waxey iska caabin kala kulmeen ilaalada madaxtooyada iyo ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Itoobiya ee halkaasi ku sugan.
Kadib iska-horimaad qaatay wax ka badan hal saac ayaa ugu dambeyntii Ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa Dowladda Soomaaliya waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan weerar qorsheysanaa oo Al-Shabaab ku qaaday xarunta Madaxtooyada koonfur galbeed ee Baydhabo.
Wararka ayaa sheegaya in ilaa hadda dadka geeriyooday ay gaarayaan 6 qof oo u badan ragii weerarkaasi soo qaaday, iyadoo uu jiro dhaawacyo soo gaaray saraakiil iyo ciidan goobta ku sugnaa.
Wararka qaar ayaa sheegay iney weerarka ku dhinteen ilaa 3 askari oo ka tirsanaa ilaalada madaxtooyada magaalada Baydhabo, inkastoo waan weli warkaas la xaqiijin.
Marka weerarku dhacayey dhacayay ayaa waxaa gudaha madaxtooyada kulan uga soconayay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo sidoo kale saraakiil ciidan.
Shariif Xasan iyo mas’uuliyiinta la joogay ayaa la sheegay iney ka badbaadeen weerarka, inkastoo weli aan la helin khasaaraha rasmi ah.
Aslahabaab oo baraha Internet-ka ee ay leeyihiin ku qoray warar horudhac ah ayaa sheegay iney halkaas weerareen, islamarkaana qarax la heleen guriga Shariif Xasan, islamarkaana dileen 7 askari oo Itoobiyaan ah.
Wasiirka Amniga: Afar nin ayaa loo qabtay qaraxii hotel Maka Almukarama